Ukuphazamiseka ... akukho foo-foo nceda. | Martech Zone
NgoLwesibini, Oktobha 10, 2006 NgoLwesibini, Oktobha 10, 2006 Douglas Karr
Izolo ibilusuku lokuqala ndize ekhaya ndaza ndazikhupha. Namhlanje nditshayisa. Njengabaninzi, ndiyindalo yomkhwa. Okubangela umdla kukuba, imikhwa yam iyiveki nganye, nangona kunjalo. Iimpela-veki zam zihlala zihlala zigcwele-ntsuku ke, nokuba ndenza ntoni na kwiveki ephelileyo, ihlala iphela ngorhatya lwangoMgqibelo. Ukuba ndifike emva kwexesha emsebenzini ngoMvulo, ndihlala emva kwexesha iveki yonke. Ukuba ndisebenza emva kwexesha ngoMvulo… Ndisebenza kade iveki yonke.
Kule mpelaveki iphelileyo ndisebenze impelaveki yonke. Siza kukhululwa emsebenzini, kwaye bendizama ukwenza iiprojekthi ezisecaleni kwe-6 ngaxeshanye. Isenzo sokulinganisa simnandi, kodwa ndithanda ukuthatha ngakumbi nangakumbi… kwaye ndisebenza nzima ngakumbi nangakumbi. Ngobusuku bokugqibela yandibamba kwaye ndalala. Ngokuhlwanje, nditshayisile. Ndikhutshiwe. Kwaye ndiyifumene 'iveki yemikhwa' yam kwisiqalo esibi. Ngoku ndizakudinwa msinya xa ndibuya emsebenzini kwaye ndiza kuzifumana ndilala ubusuku ngabunye xa ndifika ekhaya. Argh.
Kwicala eliqaqambileyo, oko kuthetha ukuba ndikwimfuno, ihlala ilungile into! Kwicala elingalunganga, andikuthandi ukuhlala emsebenzini wam. Ndinokuqonda okuhle kakhulu ukuhambisa imfezeko vs. ukuhambisa. Ndiyathanda ukugqibelela. ndiyonyanya nje ukuhambisa… nangona abathengi bam bengekhe bawazi umahluko. Ukuhambisa rhoqo kuthetha ukuba kwiinyanga kamva ndizifumana 'ndenza kwakhona' into endaziyo ukuba ngendiyenzile ngokugqibeleleyo xa ndinokuhambisa ixesha elongezelelekileyo.
Ukuthengisa kunye neSoftware kuhlala kunje, nangona kunjalo, awucingi? Ixesha elibekiweyo lifuna ukwenziwa kwaye bahlala belahla ukugqibelela. Ikhalenda ihlala ibaluleke ngaphezu kweziphumo. Isidingo sokuhambisa sinamandla kunesidingo sokuhambisa ngokugqibeleleyo. Rhoqo, ndiye ndiqaphele ukuba abathengi banokukhetha ukubingelela amanqaku, ukusebenza, kunye ne-aesthetics ukuze bafumane into ezandleni zabo kwakamsinyane kunokuba kamva. Ngaba le yimpazamo eMelika? Ukukhawuleza, ukungxama, ukungxama… ingozi? Okanye ngaba le sisiphene kwihlabathi liphela?
Andikukhuthazi 'ukuhamba'. I-Creep kuxa inkcazo yokugqitywa iqhubeka 'nokuhamba' de ungabinakho ukugqiba iprojekthi. Ndiyayicekisa 'into yokuhamba'. Ngaphandle kokuhamba, kwenzeka njani ukuba singaze sibonakale sinalo ixesha lokwenza ngokugqibeleleyo?
Kwi-South Bend Chocolate Factory, ndiyalela ikofu yam nge akukho foo-foo… Okuthetha ukuba akukho sicephe setshokholethi, akukho cream yesabhokhwe, akukho cherry, akukho luthuli lwetshokholethi okanye ufafaze isiraphu… ikofu kuphela. Akukho foo-foo endifumanela ikofu yam, ngaphandle kokulinda ezinye izinto.
Qaphela: Ukuba awuzange uye kwi Ifektri yeSouth Bend yetshokholethiUyaphoswa yindawo entle enabasebenzi abakhulu. Banobuntu ... hayi iidrones ezingenangqondo. Kwaye okokuqala ufumana i-mocha entle, qiniseka ukufumana i-foo-foo. Kukunyanga okuhle.
Buyela kwindawo yam… iifemu ziyathanda Uphando, Flickr, Imiqondiso engama-37 kunye nezinye iimpumelelo zale mihla ziphosa i 'foo foo'. Aba bantu bakha isoftware enkulu ngaphandle kwe-foo foo. Bakha izicelo ezenza umsebenzi wenziwe, kwaye bayanyanzeleka ukuba ayenzi ngaphezulu koko. Iyasebenza. Isebenza kakuhle. Abanye banokucinga ukuba 'ayifezekanga' nangona ingenayo i-foo-foo. Impumelelo enkulu kunye nokwamkelwa kwamanani kundixelela ukuba oku akuyonyani kuninzi, nangona kunjalo. Bafuna nje ukuba benze umsebenzi-ukusombulula ingxaki! Ndiyaqaphela emsebenzini wam, ukuba sichitha ixesha elininzi kwi-foo-foo.
Ndiyazibuza ukuba ngaba ungqubeka kungekho foo foo.
Mhlawumbi kufuneka siqale ukulungiselela ukuhanjiswa kwethu ngale ndlela ukuze sikwazi ukuhambisa ngcono nangokukhawuleza:
Foo-foo:Siza kuyibiza ngokuba yintoni? Iza kujongeka njani? Zeziphi zonke iindlela esinokukhetha kuzo? Benza ntoni abo sikhuphisana nabo? Zifuna ntoni iinkonzo zethu? Kufuneka siyenze nini?
Hayi foo-foo: Iza kwenza ntoni? Iza kwenza njani? Ngaba umsebenzisi angayilindela ukuba iyenze njani? Yintoni abayifunayo abasebenzisi bethu? Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuyenza?
Oktobha 16, 2006 ngo-5: 07 PM
Foo-foo, foo-foo...usazama ukuqonda ukuba oku kuthetha ukuthini ngokunxulumene nesoftware, ngokuchaseneyo nekofu. Ngekofu yayibonakala ilula ngokwaneleyo, njengoko kwi-foo-foo yayizo zonke izinto ezingaqhelekanga ezazingeyiyo ikofu. Ukusuka kwimizekelo yakho yeefemu eziphosa i-foo-foo, yonke iwebhu 2.0 ibonakala ngathi, isoftware yabo ibonakala isekwe 'kukulula', ubuncinci ngokwembono yomsebenzisi, kokubini ngokusebenzayo nangobuhle. Ndicinga ukuba apho ndibhideka khona kulapho ubuza u-foo-foo vs. akukho mibuzo ye-foo-foo, njengoko ndingaqinisekanga ukuba eminye yale mibuzo ivelisa u-foo-foo okanye hayi kulo naluphi na uhlobo.
Siza kuyibiza ngantoni? Ewe, google, flickr kunye namagama esoftware eyilwe ziimpawu ezingama-37 zonke zibonakala zibambekile kwaye zibalulekile, kwaye ndicinga ukuba ixesha elithile liye laza nazo. Iza kukhangeleka njani? Ilula, icocekile, iwebhu 2.0…kwakhona enye ingcinga ingenile koku kwezo nkampani, ukhetho…kusenjalo foo-foo ndiyacinga. Yintoni eyenziwa sikhuphisana nabo, isabalulekile, ukuba i-onlt ukuze benze okuchaseneyo, okanye ubuncinane bangakwenzi oko bakwenzayo. Into efunwa ngabaxhasi ibalulekile…into abathengi abacinga ukuba bayifunayo ayibalulekanga kangako. Kufuneka siyenze nini, isabalulekile, ngakumbi kwisoftware ye-intanethi.
Iza kwenza ntoni? Iza kuyenza njani loo nto? Akukho foo-foo apha ndiyacinga. Ngaba umsebenzisi unokulindela ukuba ayenze? Kum le inokuba yi-foo okanye ingeyo-foo. Bafuna ntoni abasebenzisi bethu? Ndicinga ukuba non-foo apha. Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuba yenziwe. Ok ke iseti yesibini yemibuzo ibonakala ingeyo-foo kum. Iseti yokuqala yile nto indibhidanise kancinci.
Mhlawumbi owona mbuzo ubalulekileyo kum ngothi 'Kutheni ifuneka?'
Oktobha 16, 2006 ngo-6: 10 PM
Usendleleni nenqaku lam. Imibuzo ifana kakhulu, kodwa yonke iyahla ukuya ngqo kumbuzo obuzile… 'Kutheni ifuneka?'
Ndinomntu endisebenza naye kunye nomhlobo, UChris Baggott, othanda ukubuza ukuba "Yiyiphi ingxaki eyisombululayo?". Igama le-app, inkangeleko, ukhetho, ukhuphiswano, izinto ezifunwayo, ixesha... zonke ezo zinikwa ingqwalasela kwihlabathi lesoftware, kodwa ayizange ibuzwe… “Isombulula yiphi ingxaki?”
Kufuneka sichithe ixesha kwimibuzo echanekileyo, kunokuba sichithe ixesha elininzi siphendula engalunganga!